2015 မှာ ကျနော်တို့မျှော်လင့်ထားရမယ့် ကား (၁၀)စီး - အပိုင... | CarsDB
2015 မှာ ကျနော်တို့မျှော်လင့်ထားရမယ့် ကား...
2015 မှာ ကျနော်တို့မျှော်လင့်ထားရမယ့် ကား (၁၀)စီး - အပိုင်း (၂)
2014 ခုနှစ်ဟာ Automobile Industry အတွက် စိတ်လှုပ်ရှားစရာနှစ်တစ်နှစ် ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်.။ 2015 မှာရော ကျနော်တို့ဘာကို မျှော်လင့်ထားသင့်ပါသလဲ. Porsche 911 ကို ယှဉ်ပြိုင်မယ့် McLaren ရဲ့ Sports Series လား၊ စတာလင်ပေါင် 140000 တန်တဲ့ Bentley SUV ကြီးလား ဒါမှမဟုတ် Mini John Cooper Works လေးပဲလား၊ ဒါမှမဟုတ် အကုန်လုံးပဲလား..
Ok, ကျနော်တို့ ဘာတွေမျှော်လင့်ထားနိုင်မလဲ ကြည့်ရအောင်..
(3) Honda NSX
သိပ္ပံရုပ်ရှင်ကားထဲက စိတ်ကူးယဉ် သိပ္ပံယာဉ်တစ်စီးလို ကြွကြွရွရွရှိတဲ့ Honda Super Car တစ်စီးဖြစ်တဲ့ Honda NSX ဟာ 2015 မှာတော့ အပြင်လောကမှာ ထွက်ပေါ်လို့လာပါပြီ.။ Twin-turbo 3.5 liter v6 အင်ဂျင်ပါဝင်တဲ့ NSX ဟာ 500 bhp စွမ်းဆောင်ရည်ရှိမှာဖြစ်ပြီး အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုတော့ မသိရသေးပါဘူး.။ ရောင်းဈေး စတာလင်ပေါင် 100000 ဖြစ်ပါတယ်.။
(4) Porsche Cayman GT4
Cayman GT4 ဟာ အချိန်အတော်ကြာ ကောလဟာလအနေနဲ့ရှိနေခဲ့ပြီးနောက် 2015 မှာ ထွက်ရှိလာဖို့ ရှိနေပြီဆိုတဲ့ အတွင်းသတင်းရရှိထားပါတယ်.။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များ မသိရသေးပေမယ့် 3.4 သို့ 3.8 အင်ဂျင်အမျိုးအစား ပါဝင်နိုင်မယ်လို့ယူဆရပြီး 380-400 bhp ရှိမယ်လို့ သိရပါတယ်.။ Porsche ရဲ့ မော်ဒယ်တွေဖြစ်တဲ့ GT-3 နဲ့ GT 3RS တို့ပေါ်မှာ အခြေခံတည်ဆောက်ထားမှာ ဖြစ်ပြီး ကျန်တဲ့အသေးစိတ်များကိုတော့ မသိရသေးပါဘူး.။
2014 ခုနှဈဟာ Automobile Industry အတှကျ စိတျလှုပျရှားစရာနှဈတဈနှဈ ဖွဈခဲ့ပါတယျ.။ 2015 မှာရော ကနြျောတို့ဘာကို မြှျောလငျ့ထားသငျ့ပါသလဲ. Porsche 911 ကို ယှဉျပွိုငျမယျ့ McLaren ရဲ့ Sports Series လား၊ စတာလငျပေါငျ 140000 တနျတဲ့ Bentley SUV ကွီးလား ဒါမှမဟုတျ Mini John Cooper Works လေးပဲလား၊ ဒါမှမဟုတျ အကုနျလုံးပဲလား..
Ok, ကနြျောတို့ ဘာတှမြှေျောလငျ့ထားနိုငျမလဲ ကွညျ့ရအောငျ..
သိပ်ပံရုပျရှငျကားထဲက စိတျကူးယဉျ သိပ်ပံယာဉျတဈစီးလို ကွှကွှရှရှရှိတဲ့ Honda Super Car တဈစီးဖွဈတဲ့ Honda NSX ဟာ 2015 မှာတော့ အပွငျလောကမှာ ထှကျပျေါလို့လာပါပွီ.။ Twin-turbo 3.5 liter v6 အငျဂငျြပါဝငျတဲ့ NSX ဟာ 500 bhp စှမျးဆောငျရညျရှိမှာဖွဈပွီး အသေးစိတျအခကျြအလကျမြားကိုတော့ မသိရသေးပါဘူး.။ ရောငျးစြေး စတာလငျပေါငျ 100000 ဖွဈပါတယျ.။
Cayman GT4 ဟာ အခြိနျအတျောကွာ ကောလဟာလအနနေဲ့ရှိနခေဲ့ပွီးနောကျ 2015 မှာ ထှကျရှိလာဖို့ ရှိနပွေီဆိုတဲ့ အတှငျးသတငျးရရှိထားပါတယျ.။ အသေးစိတျအခကျြအလကျမြား မသိရသေးပမေယျ့ 3.4 သို့ 3.8 အငျဂငျြအမြိုးအစား ပါဝငျနိုငျမယျလို့ယူဆရပွီး 380-400 bhp ရှိမယျလို့ သိရပါတယျ.။ Porsche ရဲ့ မျောဒယျတှဖွေဈတဲ့ GT-3 နဲ့ GT 3RS တို့ပျေါမှာ အခွခေံတညျဆောကျထားမှာ ဖွဈပွီး ကနျြတဲ့အသေးစိတျမြားကိုတော့ မသိရသေးပါဘူး.။
Posted at: 06-01-2015 08:29 AM